Mpanamboatra sy mpamatsy dingana famonoana maty any China Mestech
Dingana fanariana maty dia ny dingan'ny metaly metaly, varahina, aliminioma, manezioma, firaka, firapotsy sy firaka firaka vita amin'ny firaka ary alloys ao aminy no atsonika amin'ny hafanana ambony ary atsofoka ao amin'ny lavaky ny bobongolo, ary avy eo mangatsiaka amin'ny tsindry ahazoana ampahany.
Ny mari-pana miasa ny famonoana vy tsy ferrous dia ambany lavitra noho ny fanariana vy, ary ny fitaovana fananganana fananganana sy ny fizotrany dia tsotra sy kely. Ny famokarana Die casting dia afaka mahazo kalitao tsara sy refy marina amin'ny refy, indrindra ho an'ny fanamboarana maridrefy faritra kely sy salantsalany, izay manome fanohanana tsara ho an'ny elektronika maoderina, fitaovana elektrika, fiara, fitaovana fitsaboana, fitaovana ary kithen fitaovana. Ny metaly metaly samihafa dia samy manana ny toetrany amin'ny fizotrany fanariana maty. Ny fizarana farafahakeliny ary ny drafitra farafahakeliny dia samy hafa, ny hafanan'ny teboka miempo dia samy hafa, ny famaranana ny tany dia samy hafa, Ka tsara kokoa ny mampiditra ny ekipan'ny injenierantsika aloha mandritra ny fizotran'ny famolavolana hampiasa ny fahaizantsika miaraka amina famolavolana.
Misy antony dimy lehibe amin'ny fizotran'ny fanariana vy:
1.Die fanariana fitaovana;
2.Ny karazana fizotran'ny fanariana faty;
3.Die casting casting;
4.Die fanariana lasitra;
5.Prosesina sy famitana ny paikady ho an'ny singa fanariana maty
Dingana fanariana vy matydia dingan'ny fampiraisana ny tsindry, ny hafainganana ary ny fotoana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo singa telo amin'ny milina, bobongolo ary firaka. Ho an'ny miasa mafana vy, ny fisian'ny tsindry no tena mampiavaka ny fizotran'ny fanariana maty izay tsy mitovy amin'ny fomba fanariana hafa. Ny fanerena fanerena dia fomba fanariana manokana tsy misy fanapahana ary tsy misy fanapahana, izay nivelatra haingana tamin'ny teknolojia fanodinana vy maoderina. Izy io dia dingan'ny famenoana ny bobongolo amin'ny metaly metaly eo ambany fanerena avo sy haingam-pandeha, ary mamorona fanariana amin'ny alàlan'ny kristaly sy fanamafisana eo ambany tsindry avo. Ny tsindry ambony sy ny hafainganam-pandeha no tena mampiavaka ny fanariana maty. Ny tsindry ampiasaina matetika dia megapasikaly am-polony, ny hafainganam-pandeha (hafainganana amin'ny vavahady anatiny) dia manodidina ny 16-80m / s, ary ny fotoana famenoana ranoka metaly ao anaty lavaka bobongolo dia tena fohy, manodidina ny 0.01-0.2s. Ny famoahana vy dia metaly fanariana vy izay miavaka amin'ny fanerena ny metaly metaly ao anaty tsindry ambony ho any an-kitron'ny bobongolo. Ny loaka sy ny fotony dia amboarina amin'ny alàlan'ny famonoana vy vita amin'ny vy izay namboarina ho endrika ary miasa mitovy amin'ny bobongolo tsindrona mandritra ny fizotrany. Miankina amin'ny karazana vy natsipy, milina mafana na mangatsiaka no ampiasaina.
1.Die casting materialMESTECH dia manome ampahany maty ho an'ny firaka zinc, firaka aliminioma ary firaka magnesium. Satria ireo fitaovana telo ireo no be mpampiasa firaka maty ankehitriny.
Toetra mampiavaka ny firaka zinc:
--- Hery sy hamafisana
--- Fitaovana elektrika tena tsara
--- Fitaovana mafana be
--- akora mora
--- Fahamarinana avo lenta sy filaminana
--- Mahay manda manify tena tsara
--- Fahafahana manao endrika mangatsiaka, izay manamora ny fidirana
--- Toetra famaranana avo lenta
--- Fanoherana ny harafesina miavaka --- Ny famerenana amin'ny laoniny feno
2.Aluminum firaka toetra:
--- mari-pana miasa
--- fanoherana mitrandraka miavaka
--- Tsara ny hamafin'ny tanjaka sy ny tanjaky ny lanjany
--- Toetoetra miaro tena tsara EMI sy RFI
--- Fitaovam-pitaterana hafanana tena tsara
--- Fitondra mandeha amin'ny herinaratra avo
--- Toetra tsara famaranana
--- Fanarenana feno
3. Magnesium Alloy mampiavaka:
--- Fitaovana avo lenta; herinaratra, ary hafanana
--- mahazaka ny mari-pana miasa
--- Ny fahaizan'ny rindrina manify miavaka
--- Fanoherana ny harafesin'ny tontolo iainana
1 Ny fizotry ny famoahana ny efitrano fandraisam-bahiny
Ny famoahana ny efitrano fandraisam-bahiny, indraindray antsoina hoe fanariana gooseneck, no malaza indrindra amin'ny fizotran'ny fanariana faty roa. Amin'ity dingana ity, ny efitrano misy varingarina misy ny mekanisma fanindronana dia milentika tanteraka ao anaty fandroana vy anidina. Rafitra famahanana gooseneck metaly no mitaona ny metaly anidina ho any amin'ny lavaka maty.
Na dia asitrika mivantana ao anaty fandroana an-idina aza ny tsindrona bobongolo haingana sy mora, dia mitombo ihany koa ny fahatsentsenana ny harafoana. Noho io zava-misy io, ny fizotran'ny famoahana ny efitrano fandraisam-bahiny dia mifanaraka indrindra amin'ny rindranasa izay mitrandraka metaly misy teboka miempo kely sy be tsiranoka. Metaly tsara ho an'ny fizotran'ny fanariana ny efitrano fandraisam-bahiny dia misy ny firaka, manezioma, zinc ary varahina.
2 Ny fizotry ny famoahana ny efitrano mangatsiaka amin'ny chambre
Ny fizotran'ny famoahana ny efitrano mangatsiaka dia tena itovizany amin'ny fanariana maty ao amin'ny efi-trano mafana. Miaraka amina endrika izay mifantoka amin'ny fanalefahana ny harafesin'ny masinina fa tsy ny fahombiazan'ny famokarana, ny metaly voarendrika dia mandeha ho azy na entin'ny tanana ao anaty rafitra fampidirana. Io dia manafoana ny filàna ny mekanisma fampidirana anaty rano ao anaty fandroana vy.
Ho an'ireo rindranasa izay manintona loatra amin'ny famolavolana ny famonoana efitrano fandraisam-bahiny, ny fizotry ny efitrano mangatsiaka dia mety ho safidy hafa. Ireo rindranasa ireo dia misy ny fanariana metaly misy hafanana mampiempo be, toy ny alimo aluminium sy aliminioma.
3 Ny fizotry ny famoahana maty ambany-pressure
Ny fanariana fantson-tsindry ambany dia dingana mety indrindra amin'ny singa aluminium izay simetrika manodidina ny axi-rotation. Ny kodiarana fiara, ohatra, matetika dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fanariana fanerena ambany. Amin'ity karazana fizotra ity dia miorina mitsangana eo ambonin'ilay fandroana vy an-idina ny bobongolo ary mifandray amin'ny fantsom-panafody. Rehefa tsindriana ny efitrano (matetika eo anelanelan'ny 20 sy 100kPa) dia sintonina miakatra ny metaly ary miakatra ao anaty lasitra. Ny fanafoanana ireo mpamatsy sakafo amin'ity karazana fizotran'ny maty ity dia manome ny vokatra avo lenta.
4 Ny fizotry ny fanariana maty vacuum
Ny fanariana tsindrona vacuum (VPC) dia dingana fanariana maty vao haingana izay manome tanjaka mihombo sy porosity kely. Ity fizotrany ity dia mitovy amin'ny fanariana fanerena amin'ny tsindry ambany, raha tsy miverina ny toerana misy ny bobongolo maty sy ny fandroana vy anidina. Ny efitrano misy varingarina dia mety ho lasa banga, izay manery ny metaly anidina ho eo amin'ny lavaky ny bobongolo. Ity famolavolana ity dia mampihena ny fikorontanana ary mametra ny isan'ny fampidirana entona. Ny fanariana vacuum die dia mahasoa indrindra amin'ny fampiharana natao ho an'ny fitsaboana hafanana aorian'ny fandefasana azy.
5 Ny fizotran-tsipika famoahana maty
Ny famoahana ny famoahana dia noforonina ho vahaolana azo tanterahina amin'ny fanariana metaly sy alloys miaraka amin'ny tsiranoka ambany. Amin'ity fizotrany ity, ny metaly metaly dia mameno faty maty, izay avy eo manery mikatona, manery ny metaly ho any amin'ireo faritra mihitsoka amin'ny famolavolana. Ny fizotran'ny fikolokoloana dia manome vokatra mavesatra indrindra ary dingana famenon-tsakafo amin'ny hafanana manaraka. Ny fizotrany dia matetika mifandraika amin'ny alimo alimo, ary ampiasaina amin'ny fampiharana izay mitaky fanamafisana ny fibre.
6 Ny fizotry ny famoahana ho faty semi-solid
Ny famoahana maty matevina, indraindray antsoina hoe Thixoforming, dia dingana iray hafa izay manome porosity kely sy hakitroka ambony indrindra. Masinina manapaka ny workpiece ho slugs kely kokoa, ary avy eo mafana. Raha vantany vao tonga ny fifandimbiasan'ny metaly sy ny ranoka ny metaly, ka niteraka endrika somary malemilemy, ny tanany voatifitra dia manery azy hiditra ao amin'ny lavaky ny bobongolo, izay manamafy. Ny tombony azo amin'izany dia ny fanatsarana ny marina. Ny metaly tsy ferrous toy ny firaka magnesium sy ny firaka aliminioma dia matetika ampiasaina amin'ny fizotran'ny fanariana maty.
7. Ireo karazana fizotran'ny fanariana faty
Ny karazana fizotran'ny fanariana maty rehetra dia natao ho tanjona iray ihany ao an-tsaina-manipy lasitra amin'ny alàlan'ny metaly metaly voatsindrona. Miankina amin'ny karazana metaly metaly sy ampahany habe ary ny haben'ny ampahany, ny fizotran'ny famoahana maty dia afaka manome valiny ambony noho ny fomba hafa. Ny karazany roa amin'ny fizotran'ny famoahana maty dia ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny fanalananana ny efitrano mangatsiaka. Ny fiovaovana amin'ireto karazana famoahana maty ireto dia misy:
Fanariana maty ambany tosika
Fanariana vacuum maty
Atsipazo fanipazana maty
Fanariana maty maty matevina
1 Masinina fanerena mafana famonoana maty
Araka ny firafitra sy ny firafitry ny efitrano, azo zaraina amin'ny endrika marindrano sy mitsangana izy io. Ny fitoeran-drano ho an'ny metaly anidina dia mifatotra amin'ny masinina amin'ny alàlan'ny efitrano fanerena mafana, ary ny mekanisma piston ho an'ny tsindry hydraulic vy miditra amin'ny lasitra dia napetraka ao anaty vilaniny. Ny mpandefa efitrano fandraisam-bahiny mafana sasany dia mampiasa rivotra voafehy mba hampidirana mivantana ny tsindry vy amin'ny lasitra tsy misy mekanisma piston.
Masinina fanariana maty fatoriana
Ny milina fanodinana trano mafana manery dia matetika ampiasaina amin'ny alim-pamoahana maty miaraka amina teboka miempo ambany, toy ny zinc, Magnesium ary tin.
Masinina fanerena tsindry mangatsiaka 2
Ny fandefasana ny vy any ivelan'ny masinina ary avy eo ampidirina ao anaty efitrano famindrana miaraka amin'ny sotro dia azo zaraina ho milina mangatsiaka mitsangana maty milina sy milina mangatsiaka maty mandatsa araka ny fitarihan'ny piston compression.
Ny metaly ranoka dia nesorina tao anaty lafaoro nisy ny milina fanontam-pirinty mangatsiaka mitsivalana ary natsipy tao anaty efitrano famatrarana. Ny metaly dia napetaka ao anaty lasitra amin'ny alàlan'ny piston compression, ary ny metaly tafahoatra dia natosiky ny piston hafa.
Ny milina mangatsiaka mitsivalana matevina dia mitovy amin'ny atsangana, fa ny fihetsik'ilay piston kosa dia marindrano. Ny ankamaroan'ny milina fanariana maty ankehitriny dia marindrano. Ny milina mangatsiaka amin'ny efitrano mangatsiaka dia mety metaly miempo be na metaly mora voatrabaka toy ny alimo, alloys varahina, sns.
Ny milina fanariana maty dia ampiasaina amin'ny milina fanerena fanerena. Izy io dia misy karazana milina fanontam-pirinty mafana roa manerantany ary milina fanariana maty mangatsiaka manery. Ny milina fanerena mangatsiaka manapaka milina dia mizara ho karazany roa: mahitsy sy marindrano. Ny metaly metaly dia atsofoka ao anaty lasitra amin'ny alàlan'ny milina fanariana maty eo ambanin'ny tsindry ho an'ny fampangatsiahana sy fananganana, ary ny vy metaly azo alaina aorian'ny fisokafan'ny bobongolo.
4.Die fanariana lasitra
Amin'ny lasitra isan-karazany, somary henjana ny fepetra iasana amin'ny famoahana ho faty. Ny casting casting dia ny fanaovana ny metaly metaly feno lavaka bobongolo eo ambany tsindry ambony sy haingam-pandeha ary hifandray amin'ny vy mafana miverimberina mandritra ny fizotran'ny asa. Noho izany, ny bobongolo maty dia takiana amin'ny fanoherana ny havizanan'ny hafanana avo lenta, ny fifehezana ny hafanana ary ny fanoherana, ny fanoherana ny harafesina, ny hamafin'ny fiantraikany, ny hamafin'ny mena, ny demoulding tsara sns. Noho izany dia mila teknolojia avo lenta ny teknolojia fitsaboana eto an-tany ny famoahana maty.
Izahay dia manolotra ny ankamaroan'ny serivisy fanodinana lahatsoratra sy famitana ho an'ny ampahany maty antoka avy amin'ny mpiara-miombon'antoka voafantina:
Machining CNC - mitsangana, marindrano, mihodina, 5-axis
EMI - Fiarovana amin'ny RFI
Fametahana - chrome, varahina, zinc, nikela, tin, volamena
Anodizing, Coating elektrika, Chromating / tsy chromating
Fitsaboana hafanana, Passivation, Tumbling
Fomba fizahana zavakanto an-trano
Fivoriambe mekanika maivana, ao anatin'izany ny inserts stud sy helicoil, O-ring, gasket
Fanapahana laser sy sokitra
Fitaovana elektrika sy fandefasana landy
Milina fanariana maty
Previous: Prototype plastika
Manaraka: Sady fanariana maty